China FOTON U9 / U10 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Onye nchịkwa Foton U9 / U10 ga-enwerịrị mmetụta na njem ọ bụla yana atụmatụ ọrụ ọhụụ ọhụụ, na-ekwe nkwa nnweta ụgbọ elu na itinye n'ọrụ yana yana ịrụ ọrụ nke ọma ma dị ike.
N'ozuzu Dimension 9380 * 2500 * 3400
Oche ụkwụ 4710
Curb arọ 9.8T
Ikike Oche 39 + 1 + 1/41 + 1 + 1 nke dị
Emission Standard EURO III - EURO VI
Ulo Luagge 4.8m
Ọdịdị na nkwenye nke onwe. Ọdịdị ahụ gosipụtara European avant-garde na-emebe nkwekọ zuru oke na ọwụwa anyanwụ aesthetics. Dynamic and fashionable, ya siri ike streamline ịme ngosi uwe na-ezi ezi n'ike-n'ike-ịhụ onye nchịkwa weta a aka nke obi ike n'okporo ụzọ.
Wing ekara Highlight Electroplating Frame
Nchikota ikanam LED Light
Euro VI emission ọkọlọtọ,
ngwa ngwa site na efu ruo 90 mph na 28 sekọnd.
Ọgụgụ isi jụrụ oyi usoro
Onwem na patented isi Usoro – akpaka okpomọkụ-akara jụrụ usoro na 7 electronic Fans.
Oke gradability esịmde ogo 30.
Ọrụ pụrụ iche n'okporo ụzọ dị warara
Opekempe ịtụgharị okirikiri ruru 9.8m.
iTink, onye isi IOV na-eweta, na-emepụta usoro njikwa ọgụgụ isi na-ejikọ ọrụ, njikwa, na ọrụ iji mee ka njikwa ụgbọ mmiri dị mfe.GPS nyocha oge ọ bụla nwere ike ịnweta ozi ụgbọ maka ịga n'ihu nyocha ọnọdụ, dị ka ọnọdụ ụgbọala, ọnọdụ oriri oriri, ọsọ, osooso, direction, na-agba ọsọ track